Killee Bofa Irraa Wucii Lukkuu hin Eegan (Ibsa ABO) Ebla 18, 2017 gabaasaa “Komiishina Mirga Namoomaa Itophiyaa”, Mana Marii mootummaa Wayyaanee/EPRDF irratti dhihaateen, gaaffii karaa nagaa ummata Oromon dhihaataa turee fi Ayyaana Irreechaan wal qabatee lammiileen Oromoo ajjeefaman 462 tahuu, bulchiinsa Amaaraa keessaa 140, Ummatoota Kibbaa irraa 34 ajjeefamuu gaafatamaan Komishinichaa Miseensi ABUT Addisuu Gabregzabiher […]
Gochaa Farrummaatimoo? Gochaa Nageenyaati? Abdii Boruuttiin Maraamartoo abboottii qabsoof ijoolleen si’annaa biyyaa ambaa keessa jiraan kana akka nama fiilmii tolaa daawwatuutti namoota milli’oona hedduun daawwaachaa jirra. Dhugaan kana keessaatti akka kubbaa miillaatti miseensota gurmuuleen oliif gad kokkolla’aamaa jirti. Maarree xiqqoodhaan nomoota geepha fudhachuuf dafqa xurruursaa kubbaa delleqqaa kuttannii ka’aan gara mannii masaanuu ti galchuuf wixxiffattaan […]
SBO Ebla 21,2017. Oduu, Gabaasa sirna kabajaa GGO fi gaaffii fi deebii hirmaataa kora kutaa ABO Kanadaa waliin taasisame